N'ogbe Twisted Polypropylene Film Rope Manufacturer and Supplier |Dongyuan
eriri ihe nkiri polypropylene gbagọrọ agbagọ
A na-ejikarị ejima a eme ihe dị ka baler, ihe nkedo yana ijikọ twine na griin haus.A na-emepụta ihe mbụ PP dị ka mpempe akwụkwọ dị larịị wee tụgharịa dị ka otu ma ọ bụ abụọ plys twine.Eji ejima a na-arụ ọrụ aka na igwe.Ngwa na-adịkarị ebe achọrọ njide eriri siri ike yana ihe owuwu dị nro.
PP ihe nkiri eriri
Ihe onwunwe Ihe nkiri PP nkewa, ihe nkiri PP
Dayameta 1-3 mm
Ụdị 1 ntụ ọka, 2 ntụ ntụ
ngwugwu Bọọlụ, spool, eriri igwe n'ime
Akpa kpara akpa, katọn anyị n'akụkụ
Agba Red, odo, blue, green, white, black ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Njirimara Na-eguzogide ire ere, mildew, mmiri na akụ na ụba maka ịdị mma ya dị elu.
Ọ dị mfe iji kee eriri
Ngwa eji dị ka baler, ihe nkedo,
na-ekekọta ejima maka alaka osisi
agriculture griin haus ojiji.
Enwere ike ịhazi ụdị ngwugwu ndị ọzọ
Anyị bụ eriri na net emeputa na Shandong n'ógbè China nwere ihe karịrị 20 afọ ahụmahụ.Anyị bụ ndị ọkachamara na PE na PP eriri na mmepụta net.A na-etinye ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ebe na ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ, ịkụ azụ, ngwugwu, ọdụ ụgbọ mmiri yana egwuregwu.Ụlọ ọrụ ahụ agafeela ISO9001 na SGS Management System.
Yantai Dongyuan na-achịkwa usoro niile site na akụrụngwa na-abanye n'ụlọ nrụpụta ruo na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ mbụ.Anyị ụlọ ọrụ nwere zuru okè àgwà nkwa usoro na mgbe-sale system.We nwere anyị laabu na ule igwe ịchịkwa ngwaahịa àgwà.
Anyị ejirila nnukwu ụlọ ọrụ kemịkalụ na ọdụ ụgbọ mmiri nọrọ ogologo oge.Ugbu a, anyị nwere ike ịmepụta ụgbụ 600,000 na ụdọ 30,000 kwa afọ.Site na iwebata ahịrị mmepụta ọhụrụ, anyị nwere ike ịnye ụdị dị iche iche na ọtụtụ ụdọ & ụgbụ maka ndị na-azụ ahịa si ma anụ ụlọ na esenidụt.
Anyị ji ezi obi na-anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ileta ụlọ ọrụ anyị!
Nke gara aga: Mfe splicing na eriri polypropylene gbagọrọ agbagọ
Osote: Ụdọ polyester gbagọrọ agbagọ na akpa
16mm polypropylene eriri
34 eriri eriri
4 eriri eriri
Ọnụ ahịa eriri rọba na-acha anụnụ anụnụ
Eriri eriri 6mm
Ụdọ Net ibu
Ụdọ dị ọnụ ala
Ụdọ ụlọ ọrụ
Nri eji ekekọta eriri
Ụdọ ụdọ azụ azụ
Ụdọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Plastic eriri Raw Ihe
Polypropylene Ugboro Ugboro abụọ eriri
Polypropylene eriri 12 mm
Polypropylene eriri 3mm
Polypropylene Rope Ike
Ụdọ sitere na China
Ihe eriri Maka Uwe
Ụdọ Mekig Masin
Ụdọ na Uv Nchekwa
Ụdọ ụgbọ mmiri